Product Reviews TV & Theatre
Miverina ny Dinosaurs!
Tamin'ny taona 1993, ny talen'ny Steven Spielberg sy ny mpilalao sarimihetsika manokana dia namorona ny tontolo dinosaures teo amin'ilay sarimihetsika izay nandeha an-tsehatra izay niteraka fahagagana roa sy famoahana nahomby tamin'ny DVD. Ankehitriny, efa ho efatra taona aorian'ny fampidirana Blu-ray , ireo mpankafy dia afaka mahita ny Jurassic Park Trilogy iray manontolo ( Jurassic Park, The Lost World: Park Jurassic , ary Jurassic Park III ) amin'ny famaritana avo lenta amin'ny Blu-ray Disc miaraka amin'ny horonan-tsarimihetsika indray , fanavaozana ny feo, ary ny karazan-tsarimihetsika vaovao sy ny arisiva. Mba hahafantaranao raha ny fizarana Blu-ray dia tokony ho anisan'ny traikefa an-trano an-trano, vakio ny famerenako.
Lohatenim-piangonana - Miseho amin'ny iray, na mihoatra, amin'ireo horonantsary: Richard Attenborough, Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Ariana Richards, Joseph Mazzello, Julianne Moore. Vanessa Lee Chester, William H. Macy, Tea Leoni, Mr sy Mrs T Rex, The Clan Velociraptor, ary Spinosaurus.
Tale: Steven Spielberg (Park Jurassic sy Tontolo Very) ary Joe Johnston (Jurassic Park III).
Dinosaur Effects: Stan Winston Studio - Live Action Dinosaurs, ILM - Digital Animated Dinosaurs
Discs: Discs Blu-ray telo 50GB. Ny rakitra tsirairay dia ahitana sarimihetsika iray manontolo sy fitaovana fanampiny fanampiny ho an'io sarimihetsika io.
Horonan-tsarimihetsika lahatsary: Vokatry ny horonan-tsary nampiasaina - VC-1, Video resolution - 1080p , Aspect ratio - 1.85: 1 - Sari-tany manokana sy fanafody isan-karazany.
Fehezanteny Audio : DTS-HD Master Audio 7.1 (Anglisy), DTS 5.1 (Frantsay sy Espaniola), D-Box Motion Code.
Sombin-tsoratra: SDH teny anglisy (dikateny ho an'ny marenina sy marefo), frantsay, espaniola.
Fitaovana sy Access Access: Fanaraha-maso mahaleotena, Video Timeline, Mobile-to-Go (mamela ny fidirana amin'ny votoaty an-tserasera ho an'ny trano sy fitaovana finday), Fikaroham-peo (fidirana amin'ny sarimihetsika maimaim-poana sy singa manokana izay azo vakiana), Fehezanteny (ahafahana mandefa ny solosaina mivantana raha toa ka manana connecteurs ny fitaovana ampiasainao).
Bonus Features and Supplements
- Miverena any amin'ny kianjan'i Jurassic: Dawn of a New Era
- Miverena any amin'ny kianjan'i Jurassic: Ataovy mialoha ny tantara
- Miverena any amin'ny Jurassic Park: Ny Dingana manaraka
- Park Jurassic: Manao ny lalao
- Voaray ny horonan-tsary (avy amin'ny famoahana DVD teo aloha)
- Zava-miafina ao ambadiky ny sehatra
Ilay Tontolo Very: Park Jurassic
- Famafàna voafafa
- Miverena any amin'ny kianjan'i Jurassic: hitady izao tontolo izao
- Miverena any amin'ny Jurassic Park: Zavatra efa tafavoaka
- ambadiky ny sehatra
- Miverena any amin'ny Jurassic Park: Ny fahatelo fahatongavana
- Fanamarihan'ny Audio avy amin'ny ekipa manokana momba ny fiantraikany
Ho an'ireo izay tsy mahazatra ireo sarimihetsika telo ireo, ity misy horonantsary fohy momba ny horonan-tsary tsirairay:
Jurassic Park: Mpanafika Miozolomana, John Hammond (Richard Attenborough), vonona ny hampiseho ny kianjam-pifaneraserana vaovao vaovao any amin'ny nosy akaikin'i Costa Rica, saingy mila ny fankatoavana avy amin'ny vondrom-piarahamonina siantifika, ara-barotra ary ara-dalàna aloha vao afaka manokatra izany nofinofin'ny fiainana an-jatony "Jurassic Park" ho an'ny vahoaka. Vokatr'izany, misy vondron'olona maromaro, anisan'izany ny paleontologista voamarina, no nanasa ny Dr. Alan Grant (Sam Neill) ho an'ny "sehatra manokana" izay tsy mandeha araka ny tokony ho izy.
Ny Tontolo Very: Ny kianjan'i Jurassic Efatra taona aorian'ny fisehoan-javatra tao amin'ny Jurassic Park, John Hammond (Richard Attenborough), dia manambara fa misy toerana iray fananganana dinôzika faharoa, izay akaikin'i Costa Rica, misy koa ny toerana misy ny dinosaurs mandalo malalaka. Na dia izany aza dia misy ireo orinasam-piadiana ratsy izay te-hisambotra ireo biby ary hitondra azy ireo any amin'ny tetikasa fitrandrahana Jurassic Park vao haingana ao San Diego, Ca. Ny hazakazaka dia mianatra ny biby eto amin'ny nosy ary mahita fomba iray hiarovana azy ireo tsy ho tratran'ny faniriana ara-tsosialy.
Jurassic Park III: Tonga soa aman-tsara tany amin'ny iray amin'ireo fosilan'ny dinôzôra Dr Alan Grant (Sam Neill) i William H. Macy ao Montana mba hanome azy vola be ho fanohanana ny fikarohana, raha toa izy ka mpitarika azy amin'ny fitsangatsanganana avy any amin'ny nosy dinôzôro naseho tao amin'ny The Lost World , ho fanomezana ho an'ny vadiny. Dr Grant miombon-kevitra amin'ny heviny, mieritreritra fa ho azo antoka ny fiatrehana fiaramanidina, ary tena mila ny vola izy, saingy tsy mitranga ny zava-drehetra, raha toa i Dr. Grant, ilay mpitsoa-ponenana mistery, ny vadiny, ary ny fiaramanidin'ny fiaramanidina, Nifandona tamin'ny nosy niady ho an'ny velona ...
Blu-ray Disc Presentation: Video
Ny ampahany lahatsary avy amin'ny fampisehoana Blu-ray Disc dia tsara tarehy tsara tarehy manerana ny filma telo, miaraka amin'ny kalitao avoakan'ny zokiny indrindra amin'ny vao haingana.
Ohatra, tao amin'ny horonantsary voalohany, Jurassic Park , dia nahatsikaritra ny fampitomboana kilaometatra taorian'ny famolavolana izay nahatonga ny mpihoko hiditra sy ny zavatra sasantsasany henjana amin'ny toe-javatra sasany, saingy amin'ny ankapobeny, tsy dia tena ratsy loatra ny fampiasana ny fampitomboana. Na izany aza, vokatry ny vokatra azo avy amin'ny indostria, ny haavon'ny trondro dia niakatra kely ary tamin'ny tranga iray manokana, izay nandehanan'ny jirik'i Jurassic Park amin'ny alàlan'ny ala iray mialohan'ny fahitana an'i Brachiosaurus lehibe, ny loko mena mena amin'ny jeep dia nameno ny loko somary.
Ny olana lehibe hafa, na dia olana hafa amin'ny sarimihetsika tena izy mihoatra noho ny famindrana horonan-tsary Blu-ray, dia ny fanalefahana ny antsipiriany sy ny endriny eo amin'ny dinosaurs mekanika feno sy ny CGI namany. Ity dia tranga iray ahafahan'ny Blu-ray avo lenta kokoa miseho mihoatra noho ny mety ho hitanao amin'ny dikan-dvd DVD. Na dia izany aza dia mihena ny fahasamihafana eo amin'ny sarimihetsika voalohany sy fahatelo satria ny teknôlôjian'ny mpilalao horonantsary dia manjavozavo kokoa.
Etsy ankilany, ny toerana misy ny sarimihetsika dia tsy vitan'ny tena tanteraka, ny fakàna ny ala sy ny rivotra anaty ala, fa rehefa nipoitra tamin'ny sehatra ireo dinôzôra, dia tsy nahitam-peo ny fidirana. Ny famindrana Blu-ray avo lenta avo lenta dia tsy manadino an'io zava-nitranga io.
Blu-ray Disc Presentation: Audio
Amin'ny resaka tononkalo, dia kely dia kely ny mitsikera eto. Ny fantsom-peo DTS-Master Audio 7.1 dia mahatalanjona amin'ny fifandanjana tsara eo amin'ny sehatra rehetra, amin'ny tranga vitsivitsy monja raha toa ka mety ho nifangaro tamin'ny sehatra avo lenta kokoa ny fifanakalozan-kevitra momba ny fantsom-peo.
Ny horonantsary faharoa sy fahatelo dia nampitombo ny hamafin'ny feo mifangaro. Ny endriky ny antsipirihany momba ny sonia ao amin'ny dinosaur dia mihorohoro ary ny feo manimba dia nahitana toerana tsara, ary ny fifandanjana teo amin'ny ambiance sy ny feo dia manome ny fahatsapana fa ny feo rehetra dia voajanahary ary tsy nivoaka avy tao amin'ny studio ihany. Ary koa, ny hetsika eo anelanelan'ny fantsom-pandehanana sy ny vokatra maneno avy amin'ny mpandahateny amin'ny mpandahateny dia tena novonoina tokoa, nanampy ny hatsaran'ny kalitaon'ny horonantsary. Mazava ho azy, tsy afaka mamela ny lohako aho. Ny Tyrannosaurus Rex manakaiky azy dia miantso ao anaty horonantsary roa voalohany, ary ny fandringanana an'i Spinosaurus amin'ny sarimihetsika farany dia manome antoka ny mpandahateny ho an'ny mpandahateny.
Ho fanamarihana farany eo amin'ny feon-kira, tsy azoko adino ny fampisehoana ny mozika nosoratan'i John Williams. Ny ampahan'ny mozika amin'ny feo-peo dia mifangaro tanteraka amin'ny zava-mitranga eo amin'ny efijery, manome ny fiantraikany lehibe eo amin'ny sarimihetsika sy ny lozam-piorina maharitra eo amin'ny sarimihetsika tsirairay.
Home Theater Audio Tip: Raha manana solo-peo an-tambajotra 5.1 ianao, fa tsy rafitra fandaharana audio 7.1, ianao mpandray anjara amin'ny aterineto dia afaka mampihena ny fahitalavitra mivantana ao amin'ny fantsona manodidina anao. Mijery ny sehatra fananganana mpandahateny ho an'ny mpikirakira an-trano ho an'ny antsipiriany bebe kokoa.
Misy karazana safidy tsara be dia be ao amin'ny fonosana Ultimate Trilogy, izay ahitana karazana "archival" fonosana vita avy amin'ny famoahana DVD teo aloha. Na dia izany aza dia misy andiam-baovao hafa izay manome fahalalana lalindalina kokoa amin'ny filma telo.
Ny endri-tsoratra vaovao dia ahitana fizarana enina fizarana enina: Miverena any amin'ny Jurassic Park. Sekoly telo no ao amin'ny rakibolan'ny Jurassic Park , roa ao amin'ny The Lost World , ary ny farany ao amin'ny rakibolan'ny Jurassic Park III . Ny fanadihadiana iray manontolo dia mamerina mijery ny sarimihetsika telo amin'ny fomba fijerin'izao tontolo izao ary ahitana sary vitsivitsy ary misy ny dinidinika amin'ny androany sy ny ekipany. Mahafinaritra ny mahita ireo mpilalao sarimihetsika amin'izao fotoana izao, mijery ny traikefan'izy ireo amin'ny fomba fijeriny izay mety tsy nananany nandritra ny sarimihetsika tena izy.
Na izany aza, ho ahy, angamba ny fampahalalana tena nahitana indrindra dia ny momba ireo fanamby izay tsy maintsy nandresena ny ekipa Jurassic Park , indrindra ny "evolisiona" avy amin'ny dinosaurs avy amin'ny modely fanesorana mihetsika an'i la Ray Harryhausen ho fampifangaroana tanteraka ny " habaka animatronic sy CGI.
Ny fahadisoam-panantenana ankapobeny dia ny tsy fisian'ny fanehoan-kevitry ny mpamoaka horonan-tsarimihetsika momba ny sarimihetsika sy ny ekipan'ny ekipa manaitaitra manokana ho an'ny Jurassic Park III . Mety ho nahafinaritra tokoa ny nijery ireo sarimihetsika ireo tamin'ny alalan'ny fomba fijerin'i Steve Spielberg (ho an'ny sarimihetsika roa voalohany) sy Joe Johnston (ho an'ny sarimihetsika farany), ary koa ireo mpikambana sasany manana ny fanalahidy. Na izany aza, raha ny fahitako azy, ireo mpiasam-bahoakam-peo lehibe sy mpilalao rehetra dia nasongadina amin'ny ankamaroan'ireo endri-bonus fanampiny.
1. Fampisehoana tsara tarehy.
2. Tsara be ny fanatsofana video, miaraka amin'ny tranga tsy hita isa hita ao amin'ny fizarana Cons.
3. Ny horonantsary natolotry ny tarehimarika miavaka.
4. Sansa tsara feo 7.1 nolalaovana audio soundtracks
5. Karazana tombony marimaritra iraisana.
1. Ny fanamafisana ny endriky ny faritra sy ny voankazo hita maso (indrindra indrindra amin'ny sarimihetsika Jurassic Park voalohany)
2. Tranga vitsivitsy amin'ny fotsy hoditra mamiratra ary mena mena.
3. Fahamendrehana amin'ny sehatra misy ny vokatra CGI. Ny fahasamihafana amin'ny antsipirihany dia voamarika rehefa mihintsana ny dika mitovy an'ny animatronic sy CGI amin'ny dinosaur iray mitovy.
4. Maro ny karazana safidy nalaina tamin'ny famoahana DVD teo aloha.
5. Ny fanehoan-kevitry audio ihany no asongadina ao amin'ny Jurassic Park III .
Ny Jurassic Park Ultimate Trilogy dia ohatra tsara amin'ny fomba fametahana sy manolotra sarimihetsika amin'ny format Blu-ray Disc. Voalohany, ny fonosana dia manome ny fampahalalana rehetra ilainao hahafantarana momba ny ao anaty rakitra. Zava-dehibe koa ny manamarika fa ny horonantsarimihetsika tsirairay sy ny fanafody rehetra mifandraika amin'io sarimihetsika io dia voarakitra ao anaty rakitra iray, satria misy rakitra telo ihany no ilaina amin'ny kitapo manontolo.
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy misy ny sarimihetsika amin'ny rakitra iray ary manampy amin'ny raharaham-barotra iray hafa - aorian'ny fijerinao ny sarimihetsika tsirairay dia ataovy foana ny disk ary mandehana mankany amin'ny fitaovana tsara. Ny ampahany lehibe amin'ny famelabelarana dia ny hoe tsy nampiakatra ny fiandohan'ny rakitra rehetra ny Universal miaraka amin'ny sarimihetsika fohy sy vokatra hafa. Tsy fantatro raha fangatahana nataon'i Steven Spielberg izany na raha toa ny olona eritreretina eran'izao tontolo izao fa efa be loatra ny disk ao, saingy tena nankasitraka azy ity ity mpamaky ity farafaharatsiny.
Ny fidirana ao amin'ny votoatin-javatra tena izy, tsara ny lahatsary amin'ny horonantsary tsirairay dia tsara indrindra, ary ny Jurassic Park III no tsara indrindra amin'izany lafiny izany, na amin'ny tantara sy ny script aza, ny fidirana voalohany, Jurassic Park , dia miavaka amin'ny fanomezana ny Ny fiaraha-miasa tsara indrindra, ny fisainana ary ny fiantraikany eo amin'ny fihetseham-po.
Ny fahazoana miditra video sy audio, tsara ny fampitaovana videô, saingy misy olana vitsivitsy izay azoko tamin'ny fampitomboana ny sisim-panazavana, indrindra amin'ny horonantsary voalohany, fa raha jerena ny fonosana iraisana, ny fitarainan'ny lahatsary dia tsy dia lehibe loatra.
Raha mikasika ny feo, ny fifandimbiasam- peo 7.1 DTS-HD Master Audio dia tsara. Ireo faritra manodidina dia nampiasaina ho fiantraikany goavana, tsy navotsotra rehefa tsy nilaina. Na izany aza, ny sarimihetsika tianao indrindra ity horonantsary ity - fa ny mpifanolo-bodirindrina dia mety tsy mety ...
Farany, ny fanangonana fitaovana fanampiny dia mahavariana fotsiny, ary na dia maro aza no nasongadina tamin'ny famoahana DVD teo aloha, ary ny sarimihetsika farany ihany no manasongadina fanehoam-peo iray, dia mahafinaritra ny miaraka miaraka amin'ny zavatra vaovao miaraka ao amin'ity fonosana ity. Ireo segondra amin'ny fanazavana efa ela sy vaovao dia tena manome anao ny fomba fijerin'ny sarimihetsika iray avy amin'ny tetikasa vita amin'ny vokatra vita ary ny olana ara-teknika sy logistika rehetra atrehana amin'ny fanaovana ny sarimihetsika telo.
Ny Jurassic Park Ultimate Trilogy amin'ny Blu-ray dia tokony heverina ho toerana iray ao amin'ny tranokala Blu-ray Disc.
FANAMARIHANA: Misy koa ny tranonkala Blu-ray Disc Limited Edition Trilogy Gift Set izay misy ihany koa ny sarin'ny Tyrannosaurus Rex (ny fampitahana ny rohy fampidiran-tsonia eto ambany ireo fehezanteny roa).
Ireo singa ampiasaina amin'ity famerenana ity
Home Receiver: Onkyo TX-SR705
Blu-ray Disc Player: OPPO BDP-93
TV / Monitor: Westinghouse Digital LVM-37w3 1080p LCD Monitor .
Mpilalao horonantsary Video: Vivitek Qumi (momba ny vidin'ny fanadihadiana)
Screen : SMX Cine-Weave 100² screen, Epson Accolade Duet ELPSC80 Portable Screen .
Ny mpilalao feo / mpanafika (7.1): 2 Klipsch F-2 , 2 Klipsch B-3s , Klipsch C-2 Centre, 2 Polk R300s, Klipsch Synergy Sub10 .
FIFANEKENA FIFANEKENA FIFANEKENA FIFANEKENA MOMBA NY TSIAMBARATELO High-Speed ​​HDMI Cables nomen'ny Atlona sy NextGen.
Famaritana: Ny kopian'ny fandinihana dia nomen'ny mpitory. Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny Politika etika.
ZVOX Audio dia mampiditra sarimihetsika sarobidy eo ambany fahitalavitra
Fizarana ES-SUB-CUB8-110 Fanamarinana Subwoofer
AudioXperts 4TV 2112 Audio Console - sary
Toshiba SBX4250 Sound Recorder System Review
Sound Acoustics SoundWare XS 5.1 Review Review
Atlona AT-HD4-V42 4x2 HDMI Switch - Review sy Photos
Ny Panasonic PT-RZ470 sy PT-RZ370 Projector DLP
BenQ W710ST DLP Video Projector - Sary Profile
Ampiasao ny Kitendry Color By Tool amin'ny GIMP
Inona no atao hoe snapchat, ary ahoana no hahitanao ny anao?
Ahoana ny fomba fizarana ny fotoana malalaka mora amin'ny Outlook amin'ny iOS
Kopy (Console Recovery)
Mianara ny Asanao sy ny Asanao amin'ny asa aman-draharahan'ny Desktop
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny baiko madinika
Ahoana no fomba ahafahanao maka sary manokana momba ny Twitter anao
Nizara ny sarin'ny Abidia sarin'ny sary Twitter
Ny 8 Best Tripods hividy ny 2018 ho an'ny DSLR Cameras
Ny Tantara, ny Evolisiona ary ny Hoavy
Mizara rakitra OS X Lion miaraka amin'ny Windows 7 PCs
Aiza no hahitana hafatra voafantina ao amin'ny Facebook
Fomba hahazoana mari-pototra mafy
Ny latabatra amin'ny sanda azo ampiasaina amin'ny fonosana ampiasaina matetika
Fomba telo hitazonana ny fampiharana iPhone anananao
Ny History of Mozilla's Firefox Web Browser
Ny finday 8 tsara indrindra hividy amin'ny 2018 ho an'ny ankizy
Ampiasao ny Smileys mba hampidirana fihetseham-po amin'ny mailakao
Inona no fandrakofana omenao ny solosaina findainao?